Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2010 (6)
Q and A October 2010 (6)
1. အပျိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား
2. ကိုယ်ဝန် ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာလက္ခဏာတွေပြလဲ
3. Vacuum Aspiration နည်း သုံးလိုက်လို့
4. Calcification ဆိုတာ ဘာလည်း
5. အစာအိမ်နဲ့ ဒိန်ချင်နဲ့ တည့်လား
Q: ယောက်ျား မရှိတော့ပဲနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိတော့တဲ့ သူတွေဟာ မိန်းမအင်ဂါ အပျိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား။
A: “မ-အင်္ဂါ အပျိုအတိုင်း” ဆိုတာကို ဘယ်လို နားလည်သလဲ၊ ဘယ်လို လက်ခံသလဲ။ အရင်က ဆက်ဆံဘူးမှတော့ Medical Anatomy ဆေးပညာအရရော Forensic science မှုခင်းအရပါ အပျိုလို့ မပြောနိုင်တော့ပါ။ Society and Culture လူမှုရေး ပိုင်းမှာတော့ “မအိုသေးတဲ့သူ အပျိုလေးနဲ့တူ” ဆိုတာကို လက်ခံကြပါတယ်။
Q: ကိုယ်ဝန် ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာလက္ခဏာတွေပြလဲ။ ပြီးတော့ ရာသီပေါ်ချိန်မှာ မပေါ်ပဲ ၁၅ ရက်လောက် နောက်ကျရင်ရော ကိုယ်ဝန်ရှိတာလား။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ် ဆိုရင်ရော၊ ရိုးရိုးဆရာဝန်နဲ့ ပြရင် သိနိုင်ပါသလား။
A: Morning sickness ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ လက္ခဏာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇ဝ-၈၅% ဖြစ်တတ်။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာခြင်း၊ အစာအိမ်ပြဿနာပေးခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ မကြာခဏ ဆီးသွားခြင်း၊ မောပမ်းခြင်း၊ သွေးအနည်းငယ် ဆင်းခြင်း၊ ယခင်ကထက် အားအင်ပြည့်၊ အလေးချိန် တိုးလာမည်။ အနေအထိုင် ခက်ခဲလာမည်။ အရေပြား ပြောင်းလဲမှုများရှိမည်၊ သွင်ပြင် လက္ခဏာများနှင့် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာလည်း ပြောင်းလာသည်။
ကိုယ်ဝန်ကို နုသေးရင် ဆီးစစ်မှရတယ်။ ၁၂ ပါတ် (၃ လ) မရှိသေးဘဲ ဗိုက်ကနေ စမ်းမတွေ့နိုင်သေးပါ။ Vaginal exam လုပ်ရင် ၂ လလောက်ရှိရင်သိတယ်။
ကိုယ်ဝန်ကို အဆင်ပြေရာမှာ ပြနိုင်ပါတယ်။ OG ရှိရင်အပ်နိုင်တယ်။ Labor room/Nursing home မှာ အပ်နိုင်တယ်။ တောမြို့တွေမှာ ရိုးရိုးဆရာဝန်ဆီအပ်နိုင်တယ်။ တောမှာ LHV/Midwife တွေဆီမှာလဲ အပ်နိုင်ပါတယ်။ အပ်တဲ့ဆီကနေ တဆင့်တဆင့် လွှဲရင်တော့ လွှဲတဲ့ဆီ ဆက်သွားပါ။
Q: ကျွန်မက ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်း မသိတော့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ကစားလိုက်တာ ကိုယ်ဝန်ပျက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဆေးခန်း သွားတော့ ဆရာဝန်က ကိုယ်ဝန်က ၁ လလောက်ပဲ ရှိသေးတယ် ပြောပြီး ဆေး ၃ လုံး သောက်ခိုင်းတယ်။ နောက်တစ်နာရီကြာတော့ Vacuum aspiration ခေါ်မလားပဲ လေဟာနယ်နည်း သုံးလိုက်တယ် ထင်တယ်။ အချိန်က ၁ဝ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ နောက်တစ်ပတ် ပြန်လာဖို့ လည်း ရက်ချိန်း ပေးလိုက်တယ်။ ခုထိ ဆေးခန်းမသွားဖြစ်သေးဘူး။ အဲဒါ အန္တရာယ်ရှိ နိုင်လား။ နောက်ထပ် ကလေးယူမယ်ဆိုရင်ရော ဘာ effect တွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ ဆေးခန်းက ပေးလိုက်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးကတော့ အကုန်သောက်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သားအိမ်ရှိတဲ့ နေရာက နာတယ်လို ခံစားနေရလို့ အန္တရာယ်များ ရှိနိုင်လား။ ပြီးတော့ Vacuum Aspiration နည်း သုံးလိုက်လို့ သားအိမ်ကရော အရင်လို မဟုတ်တော့ပဲ ပျက်ယွင်းသွားပြီလား။
A: Vacuum aspiration နည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်-ရှင်းနည်းက စိတ်ချရပါတယ်။ သားအိမ်ကို မထိခိုက်စေတတ်ပါ။ နောက် ကလေးယူလဲ ဖြစ်တယ်။ ကောင်းတာက ကိုယ်ဝန် ချက်ချင်း ဆက်မယူသင့်သေးပါ။ Follow up ခေါ်တာက သားအိမ် အခြေအနေကို ပြန်စစ်ဘို့ပါ။ နောက်ဆိုရင် သတိထားပေါ့။
15 Oct 10, 04:29
Q: Calcification ဆိုတာ ဘာလည်းဆရာ။
A: Calcification ဆိုတာ Calcium ဓါတ်ဆားတွေက Soft tisses တွေပေါ်လာပြီးစုပုံလာလို့ မာလာစေတာဖြစ်တယ်။ လူ့ကိုယ်ထဲမှာ ၉၉% သော ကယ်လစီယမ်က အရိုးနဲ့ သွားတွေမှာရှိပြီး ကျန်တာက သွေးထဲမှာ။ မျှခြေပျက်တဲ့အခါ သွေးလွှတ်ကြော၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုပ်၊ ဦးနှောက်တွေမှာ မလိုဘဲ လာပုံနေတတ်တယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ရင် အဖြူရောင် အနေနဲ့ပေါ်တယ်။
Q: အစာအိမ်နဲ့ ဒိန်ချင်နဲ့ တည့်လား။ ကျွန်တော်အခု အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပါ။ ကျွန်တော်က အစာအိမ် မကောင်းပါဘူး။ ဒီကကျွေးတာတွေကလည်း ထမင်းကအစ အရမ်းပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ သဟီးလို့ခေါ်တဲ့ (ဒိန်ချင်)နဲ့ အစာအိမ်ရောဂါ ရှိတဲ့သူနဲ့ တည့်မတည့်သိချင်လို့ပါ။
A: Yoghurt (Yogurt) ခေါ် ဒိန်ချဉ်ဟာ နွားနို့ကို Fermentation အချဉ်ဖေါက်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ နွားနို့ထဲက Lactose သကြားကနေ Lactic acid ဖြစ်လာတယ်။ လုပ်တုံးကတော့ ဗက်တီးရီးယားပါတယ်။ ၈ဝ ဒီဂရီအထိ အပူပေးလိုက်တော့ မလိုအပ်တဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေ သေစေလိုက်တယ်။ Curds လို ဒိန်ခဲဖြစ်မသွားဘဲ၊ ၄၅ ဒီဂရီအထိ အအေးခံလိုက်ပြီး၊ ဗက်တီးရီးယား (ကာလ်ချာ) ထည့်တယ်။ ၄-၇ နာရီထားရင် ဒိန်ချဉ် ရတယ်။ Protein, Calcium, Vitamin B2, B6, B12 တွေပါတယ်။ Antibiotic ပဋိဇီဝဆေးကြောင့်ရတဲ့ ဝမ်းလျှောတာအတွက် သူ့ကို ကြွေးသင့်တယ်။ မဆီပါတာလဲ မများပါ။
အစာအိမ်လေနာနဲ့ မသင့်လို့ မတွေ့ဘူးသေပါ။ ၂ဝဝ၉ မတ်လတုံးက အသစ်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ (ရောဂတ်) ကနေ အစာအိမ်အနာ၊ လေနာအတွက် ကာကွယ်ဆေးလို သုံးနိုင်တယ်လို့ ဂျပန်၊ ကျိုတို၊ အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ်က Chemist ဖြစ်သူ Dr. Hajime Hatta ကနေ National Meeting of the American Chemical Society မှာ ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခု ဂျပန်မှာ Dr. Piro နဲ့ ကိုရီးယားမှာ Gut နာမယ်တွေနဲ့ ရောင်းချနေပါတယ်။